Uphika eyokuba ngusomatekisi uL’vovo | Isolezwe
Uphika eyokuba ngusomatekisi uL’vovo
Isolezwe / 30 August 2012, 12:48pm / FANELESIBONGE BENGU
UMCULI we-kwaito u L'vovo Derrango uthi akanawo amatekisi njengoba ejwayele ukubonakala ehleli nosomatekisi. Lo mculi ubuye waveza ukuthi usesayine ne Soul Candi ezosabalalisa umculo wakhe
UMCULI wekwaito waseThekwini uL’vovo Derrango uthe akanawo amatekisi kulandela ukuqubuka kwezinsolo zokuthi usengene kule mboni.
UL’vovo uthe ukubonakala kwakhe ehleli nosomatekisi ngasenxanxatheleni yezitolo iGame City, eGreyville, eThekwini, akusho ukuthi usuke egade umsebenzi.
“Omalume bami banamatekisi ngakho ngisuke ngivakashele bona njengoba nawe uke uvakashe komalume bakho. Ngenxa yokuthi abantu basibona sihleli, bazitshela ukuthi nami nginamatekisi kanti akunjalo. Uma kwenzeka ngigcina nginayo ngizophumela obala ngisho. Okunye engisuke ngiyokwenza wukuyowasha imoto ngoba kukhona indawo yokuziwasha,” kusho uL’vovo wodumo lwezingoma ezithi Bayan’gsukela, Resista nethi Inamandla.
UL’vovo okulindeleke ukuthi akhiphe i-albhamu yakhe yesihlanu ethi The Headmaster, uveze ukuthi usayine neSoul Candi okuyinkampani ezosabalalisa le albhamu athe izophuma ngoMsombuluko.
Phambilini kuke kwavela izindaba zokuthi lo mculi usayine ne-Universal Music ukuthi isabalalise umculo wakhe kodwa uthe babuye bangavumelana ngezinto ezithize.
“Babefuna ukuthatha wonke umsebenzi wami otholakala kwi-internet nakuma-downloads nokungezinye zezinto esingavumelananga ngazo kodwa manje ngiyajabula ngokuthi ngisayine nabeSoul Candi nokuyinkampani enkulu futhi ehlonishwayo. I-albhamu yami izongena ezitolo ngoMsombuluko kanti izobe isatshalaliswa yibona,” kusho yena.
Lo mculi uthe kule albhamu enezingoma ezingu-12 usebenze nabaculi abahlukene okukhona kubona uProfessor engomeni esiqalile ukuzwakala emisakazweni nasezindaweni zobumnandi ethi Palesa.
“Ngisebenze noBrickz engomeni ethi EzakwaDerrango, ngabuye ngasebenza noChomee, Zakwe, Pro, Mondli Ngcobo noMthunzi ongumculi osenkampanini yami ocula umasikandi. Abantu bangalindela uhlobo lomculo abangazi ngalo ngoba akukho okutheni engikushintshile. Ingoma ethi Palesa ikubeka esithombeni sokuthi iThe Headmaster iphetheni,” kuphetha uL’vovo.